ရောက်တတ်ရာရာ – Everybody Read TChen
9 – 11 – 2001 (twin towers 9/11)
3 – 10 – 2011 (Japan Earthquake)
12 -21 – 2012 (what will happen…???)
Posted on March 14, 2011 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ရောက်တတ်ရာရာ5 Comments on 2012 true or false???
money money lar lar
money money myan myan lar
lar lar money lar
ohm ohm myan myan lar
Posted on March 3, 2011 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ရောက်တတ်ရာရာ1 Comment on my new spell
green to world
Posted on March 3, 2011 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ရောက်တတ်ရာရာ2 Comments on my new moto
Posted on February 11, 2011 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ရောက်တတ်ရာရာLeaveacomment on ဝင်းရှဲ ဝဲရှင်း
ဟောင်းရှော…? (ကိုယ်တိုင်မေး ကိုယ်တိုင်ဖြေ)
ယူလိုက်ရင် ပိုသေချာမလား? မယူဖြစ်ရင်ကော (ချစ်တာ…)သေချာလား? စာချုပ်ကကော သေချာရဲ့လား? စိတ်က ပိုသေချာသလား? စိတ်မပါဘဲ စာချုပ်ကြီးပဲဆိုရင်ကော သေချာလား?
အန်တီချမ်း said… တနေရာရာမှာ တခုခုကတော့ သေချာမှာပါ
Posted on February 11, 2011 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ရောက်တတ်ရာရာLeaveacomment on ဟောင်းရှော…? (ကိုယ်တိုင်မေး ကိုယ်တိုင်ဖြေ)